Ị nwere ike e nri ye gị ugbu a Android version na chọrọ enwe ụfọdụ ọhụrụ atụmatụ na ndị ọzọ nwere, ma ọ bụ melite ọhụrụ Android version nke gị OEM emeghị-enye ma, mgbe ahụ, ọ bụ oge Flash a ọhụrụ Android version (ma ọ bụ ROM) n'ihi na mma ahụmahụ.
Gịnị bụ a ROM?
N'ezie ROM bụ nnọọ otu dị ka Windows arụ ọrụ usoro nke nwere nsụgharị dị iche iche, n'agbanyeghị na ọ bụ ngwaahịa ROMs si Google ma ọ bụ manufactures, ma ọ bụ omenala ROMs sitere na ndị ọzọ. Ya mere na-egbu maramara a ọhụrụ ROM nhata iji wụnye a ọhụrụ sistemụ na ekwentị gị.
Dị ka ndị nghoputa na Google Plus, dị nnọọ 43% ọrụ gbanyere mkpọrọgwụ ha ngwaọrụ, anyị nwere ike irite uru a otutu site dịrị anyị na ngwaọrụ na-egbu maramara a omenala ROM bụ ihe kasị mkpa mere maka otutu nke ọrụ, kamakwa anyị ga-eche ihu a otutu dịrị ize ndụ dị ka ndum-akwụkwọ ikike, mgbe ọ bụrụ na ị akpatre mere mkpebi na ndị dị njikere Flash a ọhụrụ ROM gị Android ngwaọrụ, biko soro nzọụkwụ site nzọụkwụ Nkuzi dị ka n'okpuru.
Nzọụkwụ otu: Unlock bootloader na Flash a Custom Iweghachite
N'ihi na akpọchi usoro bụ dị iche iche nke ọ bụla ekwentị, anyị nwere ike na-aga site nkọwa nzọụkwụ site nzọụkwụ, biko ịchọ otú Ị kpọghee ekwt gị kpọmkwem ekwentị na Google. Mgbe ahụ download mgbake (TWRP ma ọ bụ ClockworkMod) Flash ya. Cheta na: akpọchi bootloader na Flash a omenala mgbake apụtaghị dịrị ngwaọrụ gị, ọ bụ n'ezie nzọụkwụ mbụ tupu dịrị. Ma anyị ike ikwu na ị kwụsịrị na ngwaọrụ ndabere data.
Nzọụkwụ abụọ: ndabere All Your Data
Ihe mbụ i kwesịrị ime mgbe akpamfia mgbake bụ nkwado ndabere na mpaghara ihe niile ị nwetara na ngwaọrụ gị. Anyị kwesịrị ime ka a Nandroid ndabere nke bụ zuru ezu oyiyi nke anyị ugbu a usoro. Ọ bụrụ na ihe na-aga na-ezighị ezi, anyị nwere ike iweghachi anyị na ngwaọrụ akpa ebe anyị malitere rooting. Anyị nwere ike ịzọpụta a otutu nsogbu ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla nwetara ihe ọjọọ nke n'ezie itịbe nnọọ mgbe. Lee ndị dị mfe iji mee ka a Nandroid ndabere.
Reboot ngwaọrụ gị na-abanye na mgbake mode, dị iche iche ngwaọrụ nwere ụzọ dị iche iche, ma mgbe ọ na-agụnye 2 buttons: Ike na olu button, biko chọọ kpọmkwem ụzọ maka gị kpọmkwem ngwaọrụ.
Head na 'ndabere' ma ọ bụ 'Nandroid' ngalaba na mgbake mode, gosi nkwado ndabere na mpaghara na ndabara ntọala ga-OK.
Chere maka a nkeji ole na ole ka ọ na ịrụcha.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji wụnye niile nke ngwa otu otu na ida ngwa ntọala mgbe na-egbu maramara ọhụrụ ROM, ị nwere ike ndabere nile ngwa ọdịnala na kwa ntọala apụ site na iji ngwa Titantium ndabere nke na-achọ dịrị. Nke ahụ bụ ihe mere anyị ji ike ikwu na ị kwụsịrị ngwaọrụ gị apụ.
Nzọụkwụ atọ: na-egbu maramara na ROM Ị Chọrọ
Firstly mkpa ka ị ibudata ROM gị mkpa nke bụ a zip faịlụ, ebe a bụ 6 kasị ewu ewu na omenala ROMs ị pụrụ ịtụle. Mgbe ebudatara ROM, detuo ya na gị na SD kaadị na-amalite na-Flash ya.
Roboot ngwaọrụ gị na-abanye na mgbake mode ka anyị mere tupu.
Head na 'Wụnye Zip si SD Kaadị' ngalaba nke mgbake.
Ịnyagharịa ebudatara ROM na họrọ ya.
Chere maka a mgbe ka ọ gwụ.
Biko ehichapụkwa data na cache n'okpuru mgbake ngalaba, ọ pụrụ izere nsogbu ụfọdụ mere site gara aga data. Mgbe ahụ ị pụrụ reboot na-enwe ọhụrụ ROM.
Ma na-echeta iji weghachi niile ngwa ọdịnala na ntọala ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na i mere Titanium ndabere. Mgbe ahụ, ọ bụ oge na-enwe ọhụrụ shinning ROM.